Toyota Ny Fiaran’ny Tokol-ko: Very Anaty Fandikàna Ao Azia Afovoany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Mey 2017 5:08 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, Ελληνικά, Português, русский, 日本語, English
“Hainao fa hiteraka koa ny zanakao vavy ary Andriamanitra anie hiaro ireo zanany vavy tsy hiafara amin'ny toerana misy ahy izao.” hoy i Kamila mantsy ny olontiany Kairat ao anatin'ilay sarimihetsika Kazakh Tokal.
Ity lahatsoratra manaraka ity dia ampahany amin'ilay tetikasa manokan'ny Global Voices ‘Lost in Translation in Central Asia’, izay mitrandraka ireo toetra manokana mampiavaka ireo fiteny any amin'io faritra io.
Ny voalohany nandrenesako ny teny hoe tokol dia fony nisy namako niresaka momba izay fiara tiany hovidiana. Toyota RAV4 iray no nandrian'ny sainy, saingy nanao fanamarihana ho azy ilay havany lavidavitra nanaiky hanampy azy hikaroka mpivarotra. Ny fanazavàny taminy dia hoe malaza ho fiara fividin'ireo lehilahy ho an'ny tokol -ndry zareo ny Toyota RAV4.
Asehon'ilay tantara fohy hoe hatraiza ny halalin'ny fàkan'ny fametrahana ny tokol ao anatin'ny tontolo sosialy sy koltoraly ao Kirghizstan. Saingy tsy tena manome tanteraka ny tena izy ho an'io fomba fiteny feno vesatra sosialy io, izay manana teny iray, tokal, mavesabesatra ara-tsosialy ihany koa ao Kazakhstàna mpiray vodirindrina aminy, ny fandikàna manakaikikaiky kokoa an'io teny kirgizy io ho “ny vadikely , ny vady tanora indrindra”.
Raha efa nanana tantara elabe tao amin'ireo firenena roa ireo ny fanànana vady maro, ny tokol amin'izao vaninandro maoderina izao dia ambany kokoa noho ny vady faharoa ary ambony kokoa noho ny vehivavy sakaiza, izay mety hahatàna tanteraka ireo anjara toeran'ny vady, sipa sy mpanolotsaina, no sady tsy misehoseho mba tsy hahasimba ilay tokantrano “voalohan” ilay rangahy.
Miaritra ny vavam-bahoaka ireo vady Tokol , indrindra eny anivon'ireo vehivavy izay mazàna no mijery azy ireny ho toy ny mikatsaka fahasambarana amin'ny fahorian'ireo ankohonana voalohan'ilay rangahy.
Misy hira malaza iray amin'ny teny Rosiana ao amin'ny YouTube “I am a Tokal, and I Don’t Have a Soul” – Tokal aho ary tsy manam-panahy”, miresaka an'io fitsaratsaram-poana io ary mamaritra ny tokal ho toy ny ‘zaza sy ampy volana nateraky ny firenenay”.
Fomba fanao mampitolagaga
Raha toa ny tokol, na tokal, tsy misy ifandraisany amin'ny hoe vady faharoa araka ny fahitàn'ny fomba fanao Islamika azy, dia ny fomba fanao islamika nikah anefa no ampiasain'ireo lehilahy mba hanekena ireo vadikeliny ivelan'ny tokantrano ao amin'ireo firenena roa ireo, toerana izay mbola tsy ara-dalàna ny fanànana vady maro.
Tany amin'ny 2012 tany io tantara io no niseho masoandro, rehefa nolavina tsy nolaniana tao amin'ny parlemanta Kyrgyz ny volavolan-dalàna natao hiarovana ireo vehivavy niharan'ny fakàna an-keriny hovadiana. Drafitra natao hamaizana ireo mpitarika fivavahana manome tsodrano ireo fanambadiana tsy voasoratra anaty bokim-panjakàna. Nampizarazara ireo lehilahy sy vehivavy mpanao lalàna ilay fifidianana nampitaintaina.
Ireo lehilahy mpanao lalàna, hoy ny fanazavan'ny vehivavy iray parlemantera, dia tsy nanohana lalandava ilay heloka bevava fakàna ankeriny ny vehivavy tiana hovadiana, saingy na izany aza “nifidy hiaro ny tombontsoany manokana ry zareo”, izany hoe, ny zon'izy ireo hanana tokol iray na roa miaraka amin'ny tsodranon'ny mollah iray.
Ny Toyota RAV 4, tafiditra amin'ny fanamafisana ny resaka tokol ao Kirghizstan raha ny fahitàna azy. Creative commons.
Vady faharoa, Safidy faharoa
Tsy mitovy zo sivily sy sata sosialy amin'ilay vady ara-dalànan-drangahy ny Tokol . Any amin'ny laharana farany indrindra no misy ny zanak'izy ireny amin'ny resaka fandovàna, na dia misy ihany aza ny tranga maningana, toy ny rehefa alain-dralehilahy ilay tokol mba hikatsahany mibaribary ny hiteraka lahy avy aminy.
Misy honohono tsy azo nohamarinina milaza fa nàka io zotra io ihany koa ilay mpitondra tsy refesimandindy nandritry ny fotoana ela tao Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev, izay niteraka telovavy tamin'i Sara Nazarbayeva, vadiny ara-dalàna.
Saingy na nisy fahamarinany aza ireo tsahotsaho momba ny nahazoan'i Nazarbayev zanaka lahy tamim-behivavy hafa, dia i Sara, fa tsy ny tokal-n'ny filohampanjakana, no nanaraka ilay lehilahy mahery tamin'ny fitsidihany tany Angletera hihaona tamin'ny praiminisitra David Cameron sy ny Mpanjakavavy tamin'ny 2015.
Metimety araka izany ny fampiasàn'ireo Kyrgyz sy Kazakh ny teny tokol, na tokal ho toy ny mpamaritra hanondroana ireo biby fiompy tsy misy tandroka. Toy ny biby fiompy tsy manana tandroka, iangàrana no fahitan'ireo vehivavy tokol ny tenany, manatanteraka ireo anjara toerana rehetra raisin'ny tena vady araka ny fomban-drazana saingy tsy manana fahafahana hiantoka fomba fitondra tsy mitanila ho an'ireo zanany sy ny tenany.
Io toetra tsy misy tandroka io dia tsy hita velively raha tsy amin'ny fotoana isarahany amin'ireo lehilahy niaraka taminy, na amin'ny fahafatesan-dralehilahy — an'ny vady ara-dalàna daholo ireo zo omen'ny lalàna.
Tonga eny amin'ny fàfana lehibe izao ny Tokal
Latsaka kely amin'ny ampahefatr'ireo vehivavy no niteny fa manaiky ny hatao tokol raha ny tsapa hevitra nataon'ny tranonkala Kirgizy iray limon.kg, ary ho an'ireo lehilahy mpanankarena taraiky loatra vao niditra amin'ny fiainan'olondehibe, na ao Kyrgyzstan io na any Kazakhstan, lasa fanantenana iray ny fisian'ny tokol.
Trandrahana amin'ny fomba mampitaintaina ao anatin'ilay sarimihetsika Tokal notontosain'ilay Kazakh, Gaukhar Nurtas, io olana io ary nafantoka manodidina ny fianakaviana Kazakh iray manana ny toerany sy miadana, izay nahita ny fiainam-pianakaviany nirodana rehefa injay i Kairat lohan'ny tokantrano tafiditra taminà raharaha fisakaizàna tamin'ny tovovavy kely iray, Kamila.
Nihasarotra ny raharaha tamin'ny fotoana niterahan'i Kamila zanaka lahy ho an'i Kairat izay tsy vitany niaraka tamin'i Bota, ilay vadiny voalohany. Ivon'ilay sarimihetsika ny fanontaniana hoe ‘azo heverina ho fombandrazana Kazakh efa ekena ve ny Tokal, sa heverin'ireo lehilahy manankarena fa rendrarendra tsara sy azony atao.
Potsiro ity rohy ity hihainoana olona iray miteny Kyrgyz manao hoe, “Niteraka zazalahy izaho sy ny tokol -ko.”